Izithandani zife nge-Valentine’s Day | Isolezwe
Izithandani zife nge-Valentine’s Day
Isolezwe / 15 February 2013, 11:00am / NOKUBONGWA PHENYANE
Izithandani zaseMlazi zilugubhe okokugcina usuku lwayizolo (Valentine’s Day), ngemuva kokuthi zibe nengxabano kwagcina ngokuthi esinye sibulale esinye naso sizibulale.
Njengoba umhlaba wonke ubugubha lolu suku uMnuz Sizwe Shange (31), nesinqandamathe sakhe, uNksz Philisiwe Duma (25), batholwe ngumakhelwane endlini akade behlala kuyo sebebanda.
Abantu bakwa-H basale bebambe ongezansi ngesikhathi bethola izidumbu zezithandani. Kusolwa ukuthi uShange nguye obulale unina wengane yakhe.
Umakhelwane okuthiwa ubatholile ubeyobabheka ngoba ubezwa kulokhu kudlala iculo elilodwa umsakazo ukhalela phezulu.
Kuthiwa ufike walunguza ngewindi ekade livuliwe wase ebona izidumbu ezimbili.
UShange obezikhungile, kusolakala ukuthi usebenzise ipiki ukubulala intombi yakhe etholakale ilele phansi inamanxeba alo.
Kusolwa ukuthi uShange wenze lokhu ngemuva kokuba nengxabano ebisiqhubeke iminyaka nesinqandamathe sakhe okuthiwa bebengasahlali naso ndawonye.
Kuqhume isililo ngesikhathi abathatha izidumbu sebelande izidumbu zezithandani.
Umfowabo kamufi, uMnuz Xolani Shange, uthe bathole ucingo izolo ekuseni lubatshela ngesigameko.
“Besazi ukuthi kukhona ukungezwani okukhona phakathi kwabo kodwa besingalindele ukuthi sekungaze kwenzeke isihluku esingaka. Umfowethu simthole elenga, uPhilisiwe yena ubelele phansi enezingozi zepiki alisebenzisile ngesikhathi ebulawa,” kusho uShange.
Uthe besebenesikhathi eside bethandana benengane yomfana ebingahlali nabo.
Umfowabo kaPhilisiwe, uMnuz Khumbulani Duma, uthe udadewabo wake wabamtshela ukuthi isimo sibi phakathi kwakhe nobaba wengane yakhe. “Noma besingahlali naye kodwa wake wafona esitshela ukuthi uthando lwabo aluhambi kahle waze wakhetha ukuthi ahambe. sithe sizwa kwathiwa ubebuya ngokuzolanda izincwadi zakhe zeposi,” kuchaza uDuma.
Okhulumela amaphoyisa, uColonel Jay Naicker, usiqinisekisile lesi sigameko wathi kutholakale izidumbu ezimbili endlini. Uthe izidumbu zizothathwa ziyohlolwa wodokotela ukuze kubhekwe imbangela yokufa kwalaba. kuyaphenywa ngokufa kwabo.
Ngokujwayelekile usuku lwezithandani belugqokelwa umbala obomvu kodwa isigungu samabandla esizinze eThekwini, iDiakonia Council of Churches, besihlele umcimbi la bekuzokhunjulwa khona abesifazane abahlukunyeziwe nabadlwenguliwe.
Bekujwayeleke umbala omhlophe nobomvu kodwa ngenxa yezigameko ezenzeka ngalolu suku kulo mcimbi obekwenziwa kuwo umdanso obizwa nge-One Billion Rising, bekugqokwe imibala ebomvu nomnyama.